FUNDA NGOKU IINKQUBO ZETHU
Sibonelela ngeenkqubo ezifundisayo zemihla ngemihla ngo-10 AM nange-3:30 PM ngoLwesibini-uLwesihlanu kunye neenkqubo ezivelelayo ngeempelaveki. Ukufikelela kwiiNkqubo zethu zemihla ngemihla kubandakanyiwe kunye nokwamkelwa okokuqala ngqa. Bhalisela inkqubo oyinqwenelayo xa ufika kwiDesika engaphambili!
Ixesha leBali laseMbandleni
NgoLwesibini ngo 10:00 AM
Yenzelwe abafundi abaphakathi kweminyaka emi-3 ukuya kwemi-5 kodwa yonwaba kusapho lonke! Abafundisi beZiko loLondolozo lweMbali bafunda ngokuvakalayo amabali akhethwe ukunceda ukukhuthaza umdla ezincwadini nasekufundeni. Ixesha leBali leSikolweni saBasaqalayo linceda ukuvuselela intelekelelo, imifuziselo yokufunda ngendlela eyakhayo, kwaye likhuthaza ukumamela kunye nezakhono zokufunda nokubhala kwangethuba!
IMyuziyam yaBantwana yaseWilmington inamanqanaba amane ejam apakishweyo onxibelelwano, imiboniso kunye namava. Rhoqo ngenjikalanga yangoLwesithathu, joyina ootitshala bethu njengoko sijonga umboniso ngamnye omangalisayo. Fumana iMyuziyam usebenzisa ilensi entsha veki nganye! Lo msebenzi ucetyiswa kuyo yonke iminyaka!
Ufowunela bonke abantwana abanomdla! Ukufundisa abantwana ngenzululwazi, iteknoloji, ubunjineli, ubugcisa nezibalo (STEAM) yeyona ndlela ibalaseleyo yokuba abantwana bafunde ngenkqubo yenzululwazi nokuphuhlisa izakhono zabo zokucinga nzulu. Sikunye sivavanya kwaye sifunde ngakumbi malunga nehlabathi lethu elinomdla. Yiza ujonge, udlale, uphande, kwaye uzame izinto ezintsha kwi-STEAM egcweleyo Phambili! Le nkqubo inconywa kwiminyaka eyi-4+.
Ilungiselelwe iminyaka eyi-5 nangaphezulu, yiza wenze ubuchule bobugcisa bethu obukhuthazayo!
Ukuhamba kwihlabathi liphela, hamba luhlaza njengoko sisenza izinto ezisetyenzisiweyo kwaye siphinde sisebenzise kwakhona, kwaye sisebenzise izixhobo ezahlukeneyo kunye nezangaphakathi kuBantwana beCrafty! Le nkqubo inconywa kwiminyaka eyi-5+.
Qala ngebali, emva koko wongeze ishwamshwam elonwabisayo! Le nkqubo idibanisa ukufunda nokubhala kunye nokupheka. Veki nganye siza kuyila 'ngokupheka' okusekwe kwincwadi yamabali esiyithandayo.
Le nkqubo inconywa kwiminyaka eyi-3+.
I-StoryCooks ixhaswa nguHarris Teeter.
Iingcali zakho zebhayoloji ezincinci zaselwandle ziya kufunda konke malunga nebhayoloji yaselwandle ngokudlala ngokuyila, imifuniselo, imisebenzi yezandla, kunye nokunye!
I-Ocean Explorers iyacetyiswa kubantwana abaneminyaka eyi-4+.
Inkqubo yethu yeSci-Fri igubungela yonke into engaphandle kwendawo ukuya kwezona ntsholongwane zincinci emizimbeni yethu. ISayensi ngoLwesihlanu ngumthombo omtsha osebenzisanayo wezifundo zezandla-kwizifundo kunye nemifuniselo malunga nesayensi, itekhnoloji, kunye nokunye okuninzi! Le nkqubo inconywa kwiminyaka eyi-4+.
Ukufumana ulwazi oluthe kratya kwiiNkqubo zemihla ngemihla zisinika umnxeba 910-254-3534